ဗွီဒီယိုစက်ပစ္စည်းများကြိုတင်မျှော်လင့်ထားသည့် PIX-E7 ယခုတင်ပို့နေခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် Pix-E7 အခုတော့သင်္ဘော
ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် '' Highly မျှော်လင့် Pix-E7 အခုတော့သင်္ဘော
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကွင်းဆင်း၏ Pix-E စီးရီးအတွက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နယူးခုနစ်လက်မမော်ဒယ်စောင့်ကြည့်
တိကျစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့် 4K မှတ်တမ်းတင်မိသားစု
REEDSBURG, WI, ဒီဇင်ဘာ 28, 2015 - ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် ယင်းကြောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် Pix-E7 4K မှတ်တမ်းတင်လယ်ကွင်းမော်နီတာယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့နေသည်။ ခုနစ်လက်မ Pix-E7 ငါးလက်မ Pix-E5 နှင့် Pix-E5H လာရောက်ပူးပေါင်းခြင်း, Pix-E စီးရီးထဲမှာအကြီးဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 4K-သဟဇာတ Pix-E7, SDI တိကျစွာစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတခုအပြည့်အဝ suite ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် HDMI I / O အပေါင်းအားလုံးရရှိနိုင်ပါ Apple ကမှတ်တမ်းတင်ဖို့စွမ်းရည်® 4444 XQ 12-bit နဲ့မှတက် ProRes ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ။ အဆိုပါ Pix-E7, အ Pix-E5 နှင့် Pix-E5H ကဲ့သို့လည်းဆန်းသစ်သော, စူပါအစာရှောင်ခြင်း, USB-based SpeedDrive နှင့်သဟဇာတဖြစ်™ - တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းစံ mSATA Solid-State Drive ကိုရရှိထားသူတစ်ဦးထုံးစံလုပ်ဝင်း။ အဆိုပါမော်နီတာတစ်ခုအလိုလိုသိထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူလွယ်ကူသော-to-access ကိုထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်ပေါင်းစပ်တဲ့ "အကောင်းဆုံး-of နှစ်ဦးစလုံး-ကမ္ဘာ" user interface ကိုထည့်သွင်း။ အဆိုပါ Pix-E7 ကိုလည်း BNC linear input ကိုဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ပြင်ပ timecode လက်ခံနှင့်ဒုတိယ SDI ခုနှစ်တွင် features များနှင့်တာလီချိုးအလင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု Workflows များအတွက်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် input ကို / output ကို port ကို။
"အသံဖမ်းလယ်ကွင်းမော်နီတာ၏ Pix-E ကိုလိုင်းအလွန်ကောင်းစွာလက်ခံရရှိခဲ့, ငါတို့သည် Pix-E7 ယခုရရှိနိုင်ကြောင်းကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုရှင်ပေါလုဣဇာက်, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒီဇိုင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ် အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ။ "ဒီ Pix-E7 ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးမှကု သ. မရသော - ဓာတ်ပုံ၏ဒါရိုက်တာများထဲကနေကင်မရာအော်ပရေတာမှသို့မဟုတ်ဗီဒီယို DSLR ကင်မရာနှင့်အပိုကြီးသောရုပ်ရှင်ရုံ-စတိုင်ကင်မရာများ operating နေသောပညာရှင်များ, ကူညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျော်ကြားတဲ့ အသံဖုန်းများအတွက်'' အရည်အသွေးမြင့်ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းအတွက်အသုံးပြုတည်ဆောက်တစ်ဦးသေဆုံး-ချပစ်သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့် Gorilla ဖြင့်ကာကွယ်ထားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု-ခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူခဲ့သည်® ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများမှတက်ကိုင်နိုင်မယ့်အရည်အသွေးမြင့်, အကြမ်းခံမှတ်တမ်းတင်မော်နီတာ, ဘို့လိုအပ်ကြောင်း addressing Glass ကို2။ "
အဆိုပါ Pix-E7 ထိုကဲ့သို့သောပြိုင်ဘက်ကင်းအာရုံစိုက်မြန်နှုန်းများအတွက် TapZoom ™အဖြစ်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတစ်ခုအထင်ကြီး suite ကိုထောက်ပံ့အတွက် Pix-E စီးရီး၏ကျန်ပူးပေါင်းမည်; ထိတွေ့ကူညီသတ်မှတ်မှားယွင်းသောအရောင်များနှင့်မြင်းကျား; ဘောင်များအတွက်အမှတ်အသားများကိုလမ်းပြ; နှင့် waveform, Histogram နှင့် vectorscope အပါအဝင်အတိုင်းအတာရှိသောအကွာအဝေး။ အသံဖမ်းမော်နီတာ၏ Pix-E ကိုမိသားစုလည်းအများအပြားထုတ်လုပ်သူ-တိကျတဲ့, စံ lookup ပြုလုပ်နေစားပွဲ (LUTs) ပါရှိပါတယ်။ custom LUTs လည်း SD ကဒ်သို့မဟုတ် SpeedDrive မှတဆင့်အသုံးပြုရပေမည်။
အဆိုပါ Pix-E စီးရီးကိုပထမဆုံးစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းက, ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး firmware ကို updates များကိုမှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ် feature ကိုတိုးမြှင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် update ကို (v1.20) နှင့်တကွ, Pix-E7 နှင့် Pix-E5 အပေါ် SDI ထဲက (1080i) နှင့် PsF interlacing ထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါ Blackmagic တူသောကင်မရာများဘို့တစ်ခုတည်း SDI cable ကိုကျော် 6K ကိုထောကျပံ့ဖို့ 4G-SDI: အခြားမကြာသေးမီ updates များကိုကဲ့သို့သောအပိုဆောင်း feature ကိုတိုးမြှင့်မှုများ, ပါဝင်သည်® URSA®။ အားလုံးသုံး Pix-E ကိုမော်ဒယ်များ 1080p 120fps မှတဆင့်မြင့်မားသည် frame နှုန်းမှာမှတ်တမ်းတင်ပူဇော် HDMI - နှေးပြကွက်ရိုက်ကူးမှတဆင့်ဖမ်းယူများအတွက်စံပြ HDMI4 anamorphic desqueeze, 3:3pulldown ဖယ်ရှားရေး, ပြင်ပ timecode နှင့်တစ်ဦး SDI output ကိုအပေါ် aLUT enable သို့မဟုတ် disable လုပ်ဖို့စွမ်းရည်ထိုကဲ့သို့သောပြေးရတာ, လွန်းနှင့် FF / REW,2အဖြစ်တိုးမြှင်ပြန်ဖွင့်စွမ်းရည်။
နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကို v1.20 Download: www.videodevices.com/support/downloads/pix-e5-firmware.
SpeedDrive အဆိုပါ Pix-E စီးရီးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့် groundbreaking ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်နီတာ၏နောက်ဘက်မှချိတ်ဆက်သောအခါ, SpeedDrive ၏ USB 3.0 interface ကိုအလိုအလျှောက်စဉ်ဆက်မပြတ်, High-data-rate ကို 4K ကိုဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအဘို့အမရှိမဖြစ်တစ် SATA interface ကိုမှ switches ။ အသုံးပြုသူများထို့နောက်ရိုးရှင်းစွာ Pix-E7 ၏နောက်ကျောကနေဖြုတ်ခြင်းနှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်း, USB 3.0 နှုန်းထားများမှာ data တွေကိုလွှဲပြောင်းရန်မဆို USB ကကွန်ပျူတာဆိပ်ကမ်းကိုစ plug နိုင်ပါတယ်; အဘယ်သူမျှမကအထူးကဒ်စာဖတ်သူကိုသို့မဟုတ် docking station လိုအပ်ပါသည်။ နှစျခု SpeedDrive options များရရှိနိုင်ပါသည်: တစ် 240 GB ကို SpeedDrive (ကြော့မော့ဝင်းထဲမှာ mSATA drive ကို) သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ 128 တီဘီ mSATA drive ကိုမဆိုလက်ခံအတည်ပြု, Third-party 1 GB ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဝင်း-သာဗားရှင်း။
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, နှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်း အသံဖုန်းများအတွက် အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, သတင်းစုဝေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်မိုဘိုင်း, တီဗီ, ရုပ်ရှင်နဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဘဏ်ဍာအပါအဝင်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးဖြေရှင်းပေးသောဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုမော်နီတာ, အသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, ဌာနချုပ် Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းရုံးများ Madison, Wisconsin ပြည်နယ်, ချီကာဂိုနှင့်ဘာလင်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
2015 4K ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း Pix-E7 တီဗီနည်းပညာ UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် Warsaw ကို 2015-12-28
ယခင်: ဒါက Ball ကိုစစ်သွေးကြွလမ်းဖွင့် - နယူးနှစ်တင်ဆက်ဘို့ Feeds!
နောက်တစ်ခု: Yu + ပူးတွဲ။ Downtown Los Angeles မြို့က Grand Park ကနှင့် The Music ကိုရေးစင်တာရဲ့ NYELA များအတွက်ကြီးမားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားကွင်းသို့လှည့်